Intlawulo yenyanga | Ubunewunewu| ISuite3
Igumbi elise- indlu ebuhotele sinombuki zindwendwe onguMuscat RoYaL Suites
iMuscat RoYal Suites; Wamkelekile iindwendwe ezivela kwihlabathi jikelele. I-Muscat RoYal Suites yi-15min ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMuscat kunye ne-17KM, iSeeb Beautiful Beach yi-10min yokuqhuba kunye neeMall ezingaphezu kwezintathu ezikufutshane.
Indawo yeVilla igqibelele kwaye kulula ukuba undwendwe luhambe lula ngezithuthi zikawonke-wonke okanye ngemoto yakho kuzo zonke iindawo zabakhenkethi kwiindawo ezahlukeneyo zaseOman.
Umnyango olandelayo ngokuhamba umgama unayo yonke into oyifunayo kwivenkile yekofu, iivenkile zokutyela ezinokuhanjiswa ekhaya, ikhemesti, igrosari njl.njl.
Luxury uhlobo villa, ecaleni kwendlela enkulu, izithuthi zikawonke-wonke ekhoyo catch bus no 7. Yiyiphi nje 2 min ngokuhamba. Emva kwesakhiwo sepropati uneentlobo ezahlukeneyo zeevenkile kwiimfuno zakho ezahlukeneyo. Sikunika imenyu yokutya ngaphakathi kwegumbi lakho. Kufuneka nje uthathe ifowuni kwaye ufowune kwaye ukutya kuya kuhanjiswa emnyango wakho. I-Muscat Mull kunye ne-Nisto hypermarket yi-2 min ngemoto.
Uyilo lwesakhiwo ngumxube wenkcubeko yemveli yase-Omani kunye nesitayile saseYurophu sakudala sineebhedi ezi-5 zeenkwenkwezi.
Ipropathi yam ikufutshane kakhulu ijongwa ndim njengomnini omncinci wase-Omani. Ndiyakuthanda ukudibana nondwendwe lwam xa ndinexesha kwaye ndincokole ukunceda kangangoko ndinako ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi.
Ibhedi enkulu eyi-1, iisofa eziyi-2
Ibhedi enkulu eyi-1, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, 1 iisofa eziyi-
Umbuki zindwendwe ngu- Muscat RoYaL Suites
UMuscat RoYaL Suites yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Seeb